Video:-Donald Trump iyo Rw Canada oo kulankoodii ugu horeeyay yeeshay – Idil News
Video:-Donald Trump iyo Rw Canada oo kulankoodii ugu horeeyay yeeshay
Madaxweyne Donald Trump ayaa kusoo dhaweeyay Aqalka-cad ,Raisalwasaaraha Canada Trudeau joint presser. labadan dal ee dariska ah ayaa ah Gaanshaan buur wax badan wadaaga ,isla markaana uu ka dhaxeeyo Ganacsi aad u balaaran.
Shir jaraa’id oo ay wada qabteen Trump iyo presser. ayay ku tiiqtiiqsadeen sida Canada iyo Maraykanka ay uga midaysan yihiin arimo badan u leeyihiin arimo badan,iyagoo isku duubana ay uga hortagaan xaaladaha qalafsan ee lasoo gudboonaada Gobolka ay ku yalaan iyo Guud ahaan Caalamka.
Sidoo kale waxay xuseen Ganacsiga aadka u balaaran ee ka dhaxeeya labada dal,kaasoo gaaraya , 2-bilyan oo Dolar maalin walba
Dhanka kale su’aalo muhiim ahaa oo la waydiiyay labada hogaamiye ayaa waxaa kamid aha su’aal la waydiiyay Madaxweyne Trump,taasoo ahayd
”waxaad ka joojisay dalka Maraykanka qaxootiga Siiriya adoo ku eedeenaya in ay khatar ku yihiin amaanka Maraykanka,halka RW Canada uu soo dhaweeyay qaxootiga Siiriya oo waliba xabadka saaray”,hooska daawo Muuqaalka shirka jaraa’id ee Trump iyo presser oo faahfaahsan.
Be the first to comment on "Video:-Donald Trump iyo Rw Canada oo kulankoodii ugu horeeyay yeeshay"